July 19, 2021 by jerry23
Tambo dzeUSB chikamu chakakosha chehupenyu hwedu hwemadhijitari, asi dzinogona kuvhiringidza. Kubva ku USB chizvarwa kune mhando yekubatanidza, pane zvinhu zvinoverengeka zvekufunga nezvazvo. Zvakare, tambo yeUSB iyo inogona kubhadharisa foni yako kana laputopu zvakanyanya-kukurumidza zvinogona kunge zvisiri zvekumhanyisa-mhanya pakuendesa data. Saka kuti uite rako basa rekutenga rakakura USB tambo kune zvaunoda zvive nyore, isu tasarudza akanakisa USB tambo pamusika izvozvi.
Tisati tatanga, hezvino zvinhu zvishoma zvaunofanira kuchengeta mundangariro usati watenga tambo ye USB. Kana iwe uri kutenga tambo ye USB kunyanya ku kutsanya kuchaja yako smartphone kana laptop, tarisa kumhanya kwekuchaja kunotsigirwa netambo. Kana iyojaja inogona kuburitsa 100W, 65W, kana 45W, iyo tambo inokwanisa kukwanisa kutsigira izvo. Kana iwe uri kutenga tambo yeUSB iyo inoshandiswa kuendesa dhata, tarisa kuti izere tambo.
Heano anowanzo kuwanikwa USB zvizvarwa izvozvi:
USB 2.0 (inozivikanwawo se USB Hi-Speed) - inokwanisa kuendesa kusvika ku480Mbps.
USB SuperSpeed ​​5 Gbps (inozivikanwawo se USB 3.0 kana USB 3.2 Gen 1) - inokwanisa kuendesa kumusoro kune 5Gbps.
USB SuperSpeed ​​10 Gbps (inozivikanwawo se USB 3.1 kana USB 3.2 Gen 2) - inokwanisa kuendesa kumusoro kune 10Gbps.
USB SuperSpeed ​​20 Gbps (inozivikanwawo se USB 3.2 Gen 2 × 2) - inokwanisa kuendesa kusvika 20Gbps.
Zviripachena, iyo yekumhanyisa data yekumhanyisa inoenderanawo neanobatanidza mumidziyo yako. Saka kunze kwekunge zvishandiso zvako pamativi ese ari maviri zvichikwanisa zvakare kutsigira kumhanya kwakanyanya, haungavawane paunenge uchichinjisa data. Izvo zvinoenda pasina kutaura kuti tambo dzinotsigira nekukurumidza kumhanyisa kumhanyisa dzinowanzo kuve dzinodhura kupfuura idzo tambo dzinoshanda chete pakumhanya zvishoma (asi usakanganise mutengo wepamusoro seuchapupu hwakazara hwekukwira-kumhanya kugona kugona).
Yakanakisa USB Type-A kune USB Type-C Tambo: USB Hi-Speed ​​uye USB SuperSpeed ​​10Gbps
Belkin Musanganiswa DuraTek USB-C kune USB-A Cable
Iyo Belkin Mixit DuraTek tambo ine mbiri yakarukwa nylon inosimbiswa neAramid fiber yekusimba kukuru. Inotsigira USB 2.0 maratidziro uye ina tsoka ina kureba. Iyo tambo inogona kuendesa kusvika ku3A yesimba.
StarTech.com USB A ku USB C tambo
StarTech.com USB A ku USB C tambo inopihwa muhurefu hwakawanda kubva pamamita 0.5 kusvika kumamita mana. Uyezve, inotsigira USB 4 kumhanya, uye inouya newaranti yeupenyu. Inogona kubata 2.0A kuchaja.
AmazonBasics Rudzi C kuti Type A tambo
Iyi AmazonBasics USB tambo ndeimwe yeanodhura USB-IF yakasimbiswa Type A kune Type C tambo. Inotsigira USB 2.0 kumhanya uye kusvika ku3A kuchaja. Iyo tambo inopihwa muhurefu hutatu - matatu tsoka, matanhatu tsoka, uye mapfumbamwe tsoka.
Belkin BoostCharge Type-C kune Type-A tambo
Iyo Belkin BoostCharge USB-C kune USB-A tambo inogadzirwa neyakarukwa nylon yekusimudzirwa kusimba. Iyo inotsigira USB 2.0 kumhanya uye inokwanisa 2.4A kuchaja. Unogona kuitenga mune imwe kana maviri mita saizi.
Anker Powerline II AK-848061062830
Iyo Anker Powerline II tambo inouya nematanho matatu - MicroUSB, mheni, uye Type-C - kuti ugone kusarudza imwe zvichibva pane zvaunoda. Iyo tsoka nhatu muhukuru uye inosangana neUSB 2.0 maratidziro.
Iyo Anker Powerline + inouya nekaviri-yakarukwa nylon yekunze kuti iwedzere kugadzikana. Iyo yakareba gumi tsoka, uye iwe unogona kuwana grey kana tsvuku ruvara sarudzo. Iyo tambo inotsigira USB 10 kumhanya.
Belkin Type-A kusvika Type-C Charge Cable
Iyo Belkin USB-A kune USB-C tambo inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps zvirevo, saka zvakanaka pakuendesa dhata. Uyezve, inokwanisa kubhadharisa 3A. Iyo tambo ndeye tsoka nhatu pakureba.
Anker Powerline II A8465
Kunge tambo yeBelkin, iyi Anker Powerline II tambo inotsigirawo USB SuperSpeed ​​10Gbps zvirevo. Pamusoro pezvo, inokwanisa kubhadharisa 3A, uye inowanikwa mumamita matatu pakureba. Iyo tambo inouya newupenyu garandi.
Nekteck USB 3.1 tambo
Yakakura yekutamisa data
Iyo Nekteck USB 3.1 tambo yakanaka kune zvese kuchaja uye kudhinda data. Inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps maratidziro uye 3A kuchaja. Inogona kutengwa muvatema pamwe nechena mavara.
AmazonBasics Nylon Type-C kune Type-A tambo
Iyo AmazonBasics tambo inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps kududzirwa uye 3A kuchaja. Iyo inopihwa mune rimwe tsoka uye matatu tsoka saizi, uye iwe unogona kutora imwe yemana mavara sarudzo.
Cable Matters Type-A kusvika Type-C Cable
Iyo Cable Matters USB-A kune USB-C tambo yakanaka kune yekufambisa data sezvo ichiuya ne USB SuperSpeed ​​10Gbps kumhanya. Iyo zvakare inotsigira kusvika ku15W kuchaja.
Javex Type-C kusvika A Cable
Iyo Javex Type-C kune A Cable ndeye yakadzikama bhajeti tambo inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps zvirevo. Iyo USB IF yakasimbiswa uye inouya nekugara yakasimba.
Yakanakisa USB Type-C kune Type-C Tambo: USB Hi-Speed ​​uye USB SuperSpeed ​​5Gbps, 10Gbps
Cable Matters Type-C kune Type-C tambo
Iyi Cable Matters tambo yakanaka kana iwe uchida tambo ye superfast kuchaja. Iyo inotsigira inosvika ku100W kuendesa simba, uye inosangana neUSB 2.0 maratidziro. Iyo tambo inopihwa mu3.3 tsoka uye 6.6 tsoka tsoka.
Kana iwe usingade yakakwira wattage PD se100W, iyi Cable Matters tambo ine 60W PD rutsigiro zvakare sarudzo yakanaka. Inotsigira USB 2.0 maratidziro, uye inopihwa mumamita matatu uye matanhatu tsoka saizi.
Satechi Type-C kuenda Type-C tambo
Iyo Satechi tambo ndeimwe sarudzo hombe kune 100W PD tambo. Iyo zvakare inotsigira USB 2.0 maratidziro. Zvakare, iyo tambo yakapetwa-yakapetwa kuitira kuwedzerwa kusimba.
Nekteck Type-C kune Type-C tambo
Iyo Nekteck USB C kune USB C tambo ndiyo yakanaka sarudzo kune zvese zvinokurumidza kuchaja uye superfast dhata yekumisikidza. Iyo inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps maratidziro uyezve kusvika ku100W nekuchaja nekukurumidza.
Anker Powerline II AK-A8485011
Iyi Anker Powerline II tambo inotsigira ese ari maviri 100W kuchaja uye SuperSpeed ​​10Gbps maratidziro. Iyo tsoka nhatu pakureba, uye ichashanda nemalaptop ako ese uye mafoni ane Type-C chiteshi.
Cable Matters 10 Gbps Type-C kune Type-C Cable
Yakakura yekuchaja uye kudhinda data
Kana iwe uchitsvaga tambo huru inogona kupa 100W kuchaja uye 10Gbps dhata yekuchinjisa, iyi Cable Matters tambo isarudzo yakanaka. Iyo ine mutengo wakaderera uye inouya mune ese machena pamwe neakasviba mavara sarudzo.
Yakagadzika Type-C kune Type-C tambo
Iyi tambo inovharika ndeimwe sarudzo yakanaka kune ese ekukurumidza ekuchinjisa data uye nekumhanyisa kumhanya kumhanya. Iyo inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps maratidziro, uye inokwanisa kuendesa kumusoro kune 60W simba.
AmazonBasics Type-C kune Type-C tambo
Iyo yakareba tambo
Kana iwe uchida yakareba USB Type-C tambo uye uri kuda kupira zvishoma pane yekumhanyisa data kumhanyisa, iyi AmazonBasics tambo ndiyo yakanaka sarudzo. Iyo inotsigira USB SuperSpeed ​​5Gbps maratidziro uye inosvika ku3A kuchaja.
StarTech.com Type-C kune Type-C tambo
Iyo StarTech.com tambo inogona kuendesa kusvika ku60W kuchaja, uye inotsigira USB SuperSpeed ​​10Gbps kududzirwa. Iyo mita imwe muhukuru.
Idzi ndidzo dzakanakisa tambo dze USB pamusika. Iwe unogona kutora imwe zvichibva pane zvaunoda uye bhajeti. Ingo ita chokwadi chekutarisa tambo yekuchaja tambo uye nekumhanyisa data kumhanyisa. Kana iwe uchida yakakura USB Type-A kune Type-C tambo, Belkin Musanganiswa DuraTek sarudzo yakanaka, nepo kana iwe uchitsvaga Type-C kune Type-C tambo, iyo Satechi Type-C kusvika Type-C tambo yakanaka. Anker, Cable Matters, uye NekTeck zvakare vane dzimwe sarudzo dzakanaka.
Ndeipi tambo ye USB yauri kuronga kutenga? Tiudzei muchikamu chemashoko. Zvichakadaro, kana iwe uchitsvaga inokurumidza charger yefoni yako kana laptop, isu tasarudza iyo Akanakisa USB PD Anokurumidza Chaja pamusika.
The post Aya ndiwo Akanakisa Tambo dze USB: Type-A kune Type-C uye Type-C kune Type-C yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Amazon matipi uye manomano: Akanakisa ekutenga hacks kuziva
Anker PowerPort Atom III Slim ongororo: Huwandu pamusoro pehunhu
Anker PowerPort Atom PD 2 ongororo: Yakavakirwa USB-C